EAC-MN: In Ka Badan 30 Sano Adeeg ah.
In Ka Badan 30 Sano Adeeg ah.
Waxa ay Wadaagaan Shaqo bixiyaha iyo Shaqo doonaha.
Laga soo bilaabo 1976, waxaan isticmaalay isu soo dhoweyn shaqsiyeed taasoo ku saleysan sidii loo gaari lahaa baahi tirka SHAQO DOONAHA iyo SHAQO BIXIYAHA.
Waxaan bixinaa la shaqeyn shaqsi, xirfad hagid iyo daryeel taageero oo loo fidiyo kuwa shaqo raadiska ah. Sidoo kalena waxaan ka caawinaa shaqo bixiyeyaasha in ay helaan musharaxyo buuxin kara shaqooyinka banaan.
Adeegyadeena waxaa laga bixiyaa 14 meelood oo ku yaala Mpls/St. Paul iyo nawaaxigooda.
Kala soo xiriir (612) 752-8590
Maxaa ka dhigay Employment Action Center adeeg xirfad bixiyaha sida ugu badan wax utara magaalooyinka mataanaha ah?
Adeeg shaqsi ahaaneed ee heer sare ah looguna tala galay shaqo doonayaasha oo idil kana soo jeeda nololo kala duwan.
Xogag qiimeyn iyo xirfad heer sare ah.
Shaqaale ku xeeldheer talobixinta horumarka shaqada oo aad isugu taxaluujinaya sidii ay u haqab tiri lahaayeen baahidaada.
In ka badan 25 sano, EAC waxey horseed u aheyd soo saartista habab cusub si ay u caawiyaan shaqo doonayaasha iyo shaqo bixiyahaba. Ujeedadeenu waa in aan shaqsiga ku dhiira gelinaa awood uu ku muujiyo kartida shaqada uu leeyahay, ayadoo isla markaana uu dhisayo isdhexgalka qowmiyahada kana soo horjeeda midab kala sooca.
Barnaamijkeenu waxuu ku saabsanyahay in aan dadka u helno shaqooyin mustaqbal leh, natiijaduna ay noqotay in 3,117 qofood laga shaqaaleyey in ka badan 1,500 hay’adood oo kala duwan sanadkii hore oo keliya.
Shaqo doonayaasha iyo shaqo bixiyeyaashuba waxey u haystaan EAC in ey tahay xog bixiye aad u heer sareeya.
Tirakoob dhowaan laga sameeyey macaamiisha EAC, boqolkiiba 98% waxey sheegeen in ay kula talin lahaayeen saaxiibadooda ama eheladooda adeegyadeena.